Huawei Nova 5T: famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Huawei Nova 5T: Ny telefaona vaovao ao amin'ny faritra Nova
Ny laharana Nova Huawei dia nohavaozina tamin'ity taona ity tamin'ny modely vaovao. Ny marika sinoa dia namela anay ny Nova 5 sy 5 Pro, Ankoatra ny Nova 5i . Gaga isika fa manana telefaona vaovao ao amin'ity fianakaviana misy fitaovana ity isika izao. Momba ny Huawei Nova 5T io, izay telefaona iray izay nanaovana dokam-barotra herinandro lasa izay, ho toy ny kinova amin'ny Honor 20.
Ity Huawei Nova 5T ity dia fanovana novaina an'ny Honor 20. Azontsika atao ny mahita fa manana singa maro iraisana izy ireo, saingy misy fahasamihafana marobe amin'ny famaritana azy ireo. Na dia mijanona tsy miova aza ny endriny amin'ity tranga ity dia ny famoahana azy eo ambanin'ny marika lehibe amin'ity tranga ity.
Ny famolavolana dia tsy mitondra fiovana ho antsika, afa-tsy ny famaranana hafa eo an-damosiny. Noho izany dia hitantsika fa misy lavaka miandry antsika eo amin'ny efijery misy azy, izay ahafahan'ny tontonana manararaotra tsara eo anoloana ny telefaona. Any aoriana no ahitantsika fakan-tsary efatra. Ny fakan-tsarin'ny tanan-tanan'ny telefaona dia hita eo amin'ny sisiny iray, toy ny Honor 20.
Huawei Nova 5i Pro: Ny kinova iraisam-pirenena an'ny Mate 30 Lite
1 Famaritana Huawei Nova 5T
Famaritana Huawei Nova 5T
Ny marika sinoa dia mamela antsika telefaona tsara ao anatin'ny faritra avo lenta miaraka amin'ity modely ity. Ny Huawei Nova 5T dia telefaona mahery, miaraka amina endrika maoderina sy ankehitriny, izay miavaka indrindra ny fakantsariny. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo tanjaky ny fitaovana izy ireo, izay zavatra iray izay manandanja ny telefaona amin'ny telefaona hatrany ny mpanjifa. Izy io dia mitazona ireo singa lehibe fantatsika momba ny Honor 20, saingy misy fiovana sasany. Ireto ny fiparitany:
Asehoy: LCD 6,26-inch miaraka amin'ny vahaolana feno HD + 2340 x 1080 teboka
Fitehirizana anatiny: 128 GB (Azo zahana amin'ny microSD)
Fakan-tsary any aoriana: 48 MP misy vava f / 1.8 + 16 MP misy vava f / 2.2 + 2 MP misy vava f / 2.4 + 2 MP misy vava f / 2.4
Fakan-tsary anoloana: 32 MP miaraka amina f / 2.0 aperture
Batterie: 3.750 mAh misy Fast Charge 5V4.5A / 9V2A
Rafitra miasa: Android Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1
Fifandraisana: Dual SIM, 4G / LTE, Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB-C
Ny hafa: sensor sensor amin'ny lafiny iray, NFC
Refy: 154,25 x 73,97 x 7,87
Milanja: 174 grama
Huawei Nova 5T dia telefaona mahery, izay mampiasa Kirin 980 ho mpikirakira azy. Ho fanampin'izany, mamela antsika RAM mitahiry 8 GB sy fitehirizana 128 GB, mba hahafahantsika manantena fahombiazana tsara avy amin'ny fitaovana amin'ity lafiny ity. Ny bateria dia manana fahaizana 3.750 mAh, izay mamela antsika hijanona haingana ihany koa. Ny sensor sensor dia misy eo amin'ny sisiny iray ary miaraka amin'ny NFC hahafahany mandoa finday miaraka amin'ilay fitaovana, fiasa izay ankasitrahan'ny mpanjifa hatrany.
Ny fakantsary dia iray amin'ireo tanjany. Izy io dia manana fakantsary miverina efatra, kapitalin'ny sensor 48 MP no tena izy. Miaraka aminy dia manana sensor hafa isika, samy manana tanjona hafa, toy ny sensor ho lalina ohatra, ho an'ny fitambaran-tsarimihetsika tsara amin'ity lafiny ity. Ny marika sinoa koa dia mamela antsika hanan-tsaina artifisialy hanatsara ny fiasan'ny fakantsary rehetra. Eo aloha dia misy sensor 32 MP tokana ampiasaina amin'ity tranga ity, izay tsy isalasalana fa tena mandaitra tokoa rehefa miresaka selfie.
Amin'izao fotoana izao dia natolotra tao Malezia ity finday ity ary toa izany halefa tsy ho ela ao amin'ity tsena ity sy any Azia. Na dia tsy manana fampahalalana momba ny fanombohana iraisam-pirenena an'ity Huawei Nova 5T ity aza izahay amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy miandry vaovao vitsivitsy avy amin'ny orinasa isika atsy ho atsy. Tsy misy isalasalana fa mety ho finday mahaliana ny maro izy io, na dia mety hitaky ny fanombohana aza ny fitoviana amin'ny Honor 20.
Raha ny momba an'i Malezia dia hanomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 5 septambra io. Ny Huawei Nova 5T dia natomboka tamina kinova iray, izany dia miaraka amin'ny vidiny manodidina ny 330 euro hanovana. Izy io dia azo vidiana amin'ny loko manga, volomparasy sy mainty. Noho izany, izay liana dia ho afaka hahafantatra bebe kokoa momba ity maodely ity, ary manantena izahay fa hanana vaovao momba ny fandefasana azy iraisam-pirenena. Ahoana ny hevitrao momba an'ity kinova ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Nova 5T: Ny telefaona vaovao ao amin'ny faritra Nova
Ny fanamarinana Oppo Reno 2 Bluetooth dia manambara ny sasany amin'ireo famaritana azy